Midowga Musharixiinta oo ku dhawaaqay in Farmaajo yahay dambiile Qaran ayna maxkamadaynayaan. | www.jubbanews.com
(Muqdisho)-Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay joogteyn doonaan bannaan baxyada, si ay shacabka u muujiyaan rabitaankooda iyo in dalka aysan ka abuurmin diktaatooriyad.
Ugu dambeyn waxaa ay sheegeen in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u arkaan in uu yahay dambiile Qaran uusan sinabada qeyb uga noqon karin xal u helida siyaasada dalka kala-guurka ah, loona diido in uu ka qeyb-galo doorashada sida uu
Golaha Musharixintta somaliyed ee Muqdisho Talo meel Ciriryon ayey idinka Gashay,Maxamed Abdullahi Maxamed (Ina Farmajo) Madaxweynihi udanbeyey ee DFS, wa’idinka adkaday dhamantiin Sidad Hawiye utihin,marka 1aad idinka dhexdina ayuu isku kiin adgsaday,2aad Hawiye isma racsana wana kala qaybsan yahay tasina wa guusha ina Farmajo,mida 3aad Hawiye Dagal madonayo dhinac kasta marka laga fiyo,mida 4aad Musharaxinta Hawiye kalsoni kama haystan shacabkada mid Dorasho & mid Dagaal Tona,ina farmajo sidu dono ayuu ujogaya madaxtoyada somaliya hadi ladorto & Hadan ladoran wa iska Dorane
Ciidanka Puntland oo amar la siiyey & odayaal isu taagey xallinta xiisad ka taagan Gardafuu.
Axmed Madoobe iyo Deni oo shuruud horleh ku xiray ka qaybgalka shirka Muqdisho.
Ciidanka Puntland oo fashiliyey qaraxyo ay soo abaabuleen malayshiyaadka Alshabaab.
Puntland oo mamnoocday dadka ka imaanaya caalamka ee deegaamadeeda imaanaya iyo sababta.
DAAWO-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ka hadlay arrimo muhiim ah farriina u diray shacabka.
Ciidanka madaxtooyada & PMPF oo gaarey gobolka Gardafuu iyo dagaal ka dhacay deegaamadaasi.
Diyaarado hakad geliyey dulimaadyadii ay ku iman jireen Muqdisho.
Maxaa sababay baaqashada shirkii uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay ee Muqdisho.
Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Hargaysa oo la gaarsiiyey meyd & dhaawacyo.
DP World oo shaacisay lacagaha ay ku horumarinayso Somaliland & Puntland oo laga saaray.
Suldaankii Guud ee Somaliland oo goor dhaw geeriyooday & PTIMES oo Tacsi u dirtay
Tags: Farmaajo, Jubbanews.com, Madaxweynaha puntland, MUSHARAXIINTA